हस्तमैथुन सम्बन्धी केही रोचक तथ्यहरु ? (जान्नुहोस) - Experience Best News from Nepal
हस्तमैथुन सम्बन्धी केही रोचक तथ्यहरु ? (जान्नुहोस)
मानिसहरुमा विभिन्न प्रकारका धारणा तथा प्रश्नहरु रहने गर्दछन् । यौन सन्तुष्टिको सबैभन्दा सहज उपायको रुपमा रहेको हस्तमैथुनका सम्बन्धमा रहेका केही रोचक तथ्यहरु यस्ता छन्ः
बिहानको यौन–क्रिया, कति फाइदा कति बेफाईद !! जान्नुहोस्
दोब्बर यौन आनन्दका लागि यी कुराहरु गर्नुहोस्
आखिर मलाई किन हुन्छ यौन असन्तुष्ट !! कतै श्रीमानलाई असन्तुष्ट बनाइराखेको त छैन ?